Izingubo zokuzivikela Abakhiqizi Nabahlinzeki - Imboni Yezingubo Zokuzivikela e-China
Lo mkhiqizo awunazo inyumba;Ingasetshenziswa esibhedlela futhi inokungena kahle kanye nomgoqo.
Ingakwazi ukumelana ngokuphumelelayo nokungena kwamagciwane, amagciwane, utshwala, igazi, uketshezi lomzimba, izinhlayiya zothuli lomoya, kungavikela ngempumelelo umuntu ogqokile ukuthi angangenwa ukutheleleka.
Ukusebenzisa ama-nonwovens njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko, ngokusika, ukuthunga okwenziwe.Ayinanyumba futhi iyalahlwa.
Isudi Yokuzivikela Elahlwayo Yokusetshenziswa Kwezokwelapha
Ukukhethwa kwezingubo ezivikelayo kudinga ukucabangela izici eziningi ezifana nomsebenzi, usayizi, uhlobo, isenzakalo esisebenzayo, izinga lokuvikela, njll. Isibonelo, izinhlobo zihlanganisa ezihlanganisiwe, ezihlukene, izingubo zokusebenza, izingubo ezivimbela ilangabi, izingubo zokuzivikela zezokwelapha, njll.